face book မျက်နှာ ဘုတ်အုပ် မှာ အပျော် တင်ထားတဲ့ ကဗျာ လိုလို.. ဘာလိုလို လေး တခုပါ..။ အရင်းအတိုင်း ပြန် ကူးတင် လိုက်ပါတယ်။ မျက်နှာ သူငယ်ချင်း တွေ ရဲ့ ယဉ်ကျေးမူ လေး..ပျော်ရွှင်စရာလေး တခု ဆိုပါတော့..း)
by Kay Htwe on Thursday, March 3, 2011 at 11:38am
သူများလိုက် လို့ ..လိုက်
(သူ) များ..မြင်မလား လို့..လိုက်
Tin Moe Aye, Breathing Linn, Naw Shunn Lae Win and 13 others like this.
Hana San လိုက် မကေ။ :D
·2peopleYou and Aung Tha Nge like this.
Chit Kyi Aye Like like like like :)
·2people like
Rosalind Tay လိုက် .. လိုက်.. Like.. Very Like.. Very, Very Like... :)
Eain Dra အန်လိုက်.... :P
·2peopleLike
Ko Thar Ngel တိုင်းပြည်ချစ်သူတွေ နောက်ကို ( အလိုတော်ရိ )ခွေးများ တစီစီ လိုက်တာလည်း ကျန်သေးတယ် မဟုတ်လား ... မကေ ?
Kay Htwe လိုက်တာတွေ ကို ပြန်လိုက်း)
·3peopleLike
Kay Htwe ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ပြန်လိုက်
Chit Kyi Aye အန်လိုက်သာ ရှိမယ်ဆို....ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန် ကလစ်လိုက်ချင်တာ.....အဟုတ်
Moe Cho Thinn တို့ကတော့ စိတ်ထဲက ပါမှ လိုက် နိုင်မယ်ဟေ့...။
·4peopleLike
Moe Cho Thinn တကယ်က ကိုယ်ချစ်ခင်နေသူတွေ လုပ်တာ ရေးတာတွေကို ချစ်ခင်စိတ်နဲ့ ကြည့်တော့ ဖတ်တော့ like မိတာပေါ့။ you က I like တာကို မ like ဘူးလားးးး :D :D
·9peopleLike
Chit Kyi Aye ဟော Like မိပြန်ပြီတော့် အဲဒါတွေကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မ Likeတာ...
Yesterday at 2:52pm via ·
Moe Cho Thinn မမ CK, တကယ်က ကိုယ် မအားလို့ မကြည့်မိတဲ့အချိန် လွတ်သွားတဲ့ like စရာတွေ တပုံကြီး ရှိသေးတာနော်.. (CK = ချစ်ကြည်၊ ချစ်ကောင်း မဟုတ်) ဟိ..
Chit Kyi Aye ဟုတ်တယ် ချိုသင်းရဲ့ ကိုယ်ကလည်း ချစ်တတ် ခင်တတ်သူမို့ ချစ်တဲ့ ခင်တဲ့
မျက်စေ့နဲ့ကြည့် အကုန် Like ပစ်နေမိတာ...မသိရင် ဖောရှောကြီး
Yesterday at 2:57pm via ·
Turn On Ideas အဖိုးကြီးလည်း လိုက်
အဖွားကြီးလည်း လိုက် မွေးကင်းစအာပြဲလေးလည်း လိုက်
အကြော်သည်၂ယောက်ထချတော့လည်း လိုက်းP
Mae Coe ချစ်လို့လိုက်ပါတယ် :P :P
·3peopleYou, Aung Tha Nge and Little Brook like this.
Lynn Depa ကျွန်တော်တို့ကတော့ လိုက် လိုက် လိုက် တွေ ထဲကပဲ :P
Lynn Depa အပေါ်က ဒေါ်မယ်ကိုးကို ....“ချစ်လို့လိုက် ချစ်လို့ လိုက်ခဲ့တယ်.. ချစ်လိုလိုက် ချစ်လို့လိုက်ပါတယ်.. ”ဆိုပြီး “ချစ်လူမိုက်” သီချင်းကို “ချစ်လို့လိုက်”လို့ ပြောင်းဆိုရမယ် ။ :P :P
Naw Phaw like, like,like မှ like :)
Pandora Pandori အန်လိုက် :P
Naw Shunn Lae Win like ချင်လို့ like တာကို မမကေ က like တာကို အမျိုးမျိုး ဖွင့်လိုက်တော့ ကိုယ်တောင် ဘယ် like နဲ့ ညိမှန်း မသိညိသွားပြီး ရောယောင် like လိုက်တယ်... ဒါပေမယ့် သဘောကျလို့like တာပါ.... :D
Breathing Linn ဟားးဟားး မကေ ကတော့လေ.... :D :D
Aung Tha Nge ကွန်မန့်တွေ အားလုံး လိုက်သွားတယ်... ATN လောက် ဘယ်သူမှ လိုက်နိုင်မယ် မထင်ဘူး... မကျေနပ်ရင် သည်ကွန်မန့်ကို လိုက်လိုက်... ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လည်း ကိုယ့်ကွန်မန့်ကို လိုက်သွားတယ်... အေးရော...
Aung Tha Nge ခင်လေး ... ငါ့ညီမ ... ညည်းကြည့်ရတာ မကျေနပ်ဘူး ထင်တယ်...း))
Breathing Linn ကဲ... မှတ်ပလား..!! :P
Aung Tha Nge မှတ်ဘူး... လိုက်ပလိုက်တယ်...း))
Breathing Linn အို.. ဘာပဲ ပြောပြော တစ်ခါ Like ပီး ထပ် Like လို့မရတော့ဘူးပဲ စိတ်လေးတော့လျှော့လိုက်..။ ဟဲဟဲ
Aung Tha Nge ခင်လေး... ကိုကြီးကို စိတ်တိုအောင် မလုပ်နဲ့နော်... ထပ်လိုက်ပလိုက်မယ်... ဘာမှတ်နေလဲ...
Breathing Linn သေချာပါပြီ ငါ့အစ်ကိုတော် ပုလင်းမှောက်သွားပြီ.. ((ပါးစပ်ထဲပြောပါတယ်))
Aung Tha Nge လိုက်ပြီး မှောက်ပြီ... ခင်လေး...
Thet Wai ပြောင်စပ်စပ်နဲ့... လိုက် သွားတယ်...း))
Kay Htwe ငါ့ကိုလိုက်လို့..သူ့ကိုလိုက်...။ ကဲခုတော့...လိုက်...ကို လာလိုက်တဲ့ လူတွေ အကုန် ပြန်လိုက် ပြစ် လိုက်တယ်..း) ဖြစ်နိုင်ရင်..အလိုက်ပေး ပြီးတော့ တောင်..လာမလိုက် သေးတဲ့ လူတွေ ကို လိုက် ပြီး လိုက်ပြစ်လိုက် ချင်သေး..း)
Labels: facebook , friends , fun , poems
ဪ FB ကဒီလိုကိုး
ပြောင်စပ်စပ်နဲ့ Like တယ် ကေ...
သူများကို လာပြောင်သွားတာ ....
မကေ အလံနီကိုသွားလို့ မရဘူး
တို့ ကတော့ မကေဘယ်သွားသွား လိုက်အုန်းမှာ
whiterice မှာ ထမင်းစားလည်း လိုက်
ဒင်နာမှာ ရှန်ပိန်လေးကိုင်ပြီး ဂရေဟမ်ဘေးထိုင်နေလည်း လိုက်.........
အလေးနီဖြင့်က ဆင်ဆာထိတာထင်တယ်။ ခေါင်းစဉ်တွေ့ပြီး စာမတွေ့ဘူး။
မိုက်တယ် မမ :D
လိုက်ချင်လို့လိုက် - ဘာဖြစ်တုန်း :P
like .... လိုက် .... ကြိုက် ...
ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ သိပ်အက်တစ်မဖြစ်ပေမဲ့ ၀င်ကြည့်မိတဲ့ အခိုက်လေး သဘောကျရင် လိုက် မိပါတယ်။ အားနာရင်လဲ လိုက် ပါတယ်။